वर्तमान संसद अनिर्णयको बन्दी बन्ने: डा. शेखर कोइराला – Sthaniya Sarkar | - Nepal's No.1 News portal
वर्तमान संसद अनिर्णयको बन्दी बन्ने: डा. शेखर कोइराला
काठमाडौं : नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले वर्तमान संसद अनिर्णयको बन्दी बनेको बताएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसन कास्कीले पोखरामा आयोजना गरेको बिचार गोष्ठीमा कोइरालाले प्रधानमन्त्री र सभामुख दुवैका कारण संसद अनिर्णयको बन्दी बनेको बताएका हुन् ।
हिजो संविधान गुम्ने अवस्था थियो र हामीले संविधान जोगाउन कै लागि संसद पुनर्स्थापना भन्यौं। तर अहिले पुनःस्थापित संसदले बिजिनेस दिन सकेन। सभामुखको भूमिका पनि शंकास्पद रहन गयो,’ कोइरालाले भने।
यस्तै कोइरालाले यो सरकार र संसदलाई राखिराख्नु पर्ने कुनै कारण नभएको बताए । उनले अब काँग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताए ।
कोइरालाले भने, ‘यो सरकार जति दिन जति घण्टा सरकारमा बस्छ त्यतिनै अधिनायकवादतिर जान्छ । तर हाम्रो नेतृत्व गुमसुस भएको बस्नुभएको छ । किन हो मलाई थाहा छैन ।’ निरङ्कुशताको अन्त्यका लागि जन्मेको नेपाली काँग्रेसले त्यसलाई सहेर अगाडि बढ्न थाल्यो जनताले माफी नदिने बताए ।
नेता कोइरालाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले भने ,’अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरा सरकार बनाउने र गिराउने कुरा मात्र होइन । तिमी गलत काम गर्दै छौं । गलत काममा हामी सहयोग गर्दैनौं भन्ने हो । हामीले अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गर्नुपर्छ । हाम्रो पुग्दैन भन्ने ओटे जवाफ छ । पुगाउने उपाय त छ नि हामीसित । माओवादी केन्द्रको सहयोग लिऊँ न किन पुग्दैन ? अरु पार्टीलाई भनौं न किन पुग्दैन?’
माओवादीले समर्थन फिर्ता फिर्ता नलिँदा संसदमा थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको पनि उनले बताए । यस्तै कोइरालाले आगामी महाधिवेशनमा सभापति बाहेक कुनै पदमा आफूले उम्मेदवारी नदिने प्रष्ट पारे। काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरु कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गुरुराज घिमिरे र जीवन परियारले काँग्रेसको अहिलेको नेतृत्वले कार्यकर्ता माथि न्याय गर्न नसकेको र विधान अनुसार पार्टी चलाउन नसकेको बताएका थिए ।
चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू आक्रमण गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गरौ: डा.शेखर कोइराला
राष्ट्रपतिबाट फेरि संविधान च्यात्ने काम भयो : शेखर कोइराला
अब मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प छैन : शेखर कोइराला….